Kismaayo News » Maxaabiis Hindiya ku xirnayd oo dalka la keenay
Kn: Caawa fiidkii waxaa caasimadda Muqdisho soo gaaray 41 xubnood oo kamid ahaa dhalinyaro ku xirnayd xabsiyada dalka Hindiya kuwaasi oo lagu soo daayay heshiis ay dawladda Soomaaliya la gaartay dawladda Hindiya.
Dhalinyaradan ayaa ku eedaysnaa burcad badeednimo sidaasina ugu jiray xabsiyada dalka Hindiya, waxaana la sheegayaa in qaarkood ay dhamaysteen xukun 7 sano ah. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarad khaas ah u dirtay dhalinyaradan si dalka dib loogu soo celiyo waxaana soo galbiyay oo la socday xeer ilaaliyaha qaranka iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Hindiya.
Ra’iisul wasaare Kheyre, wasiiro iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ayaa dhalinyarada ku soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Wasiirkii hore ee arimaha dibadda, Yusuf Garaad ayaa lahaa inta badan dadaalka lagu soo furanaayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran meelo badan oo kamid ah daafaha caalamka, waxaan sidoo kale la sugayaa in jasiiradda yar ee Siishalis laga soo daayo maxaabiis badan oo halkaasi ugu xiran burcad badeednimo.